Ngwongwo L-threonate Magnesium (778571-57-6) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / Magnesium L-threonate ntụ ntụ
Rating: SKU: 778571-57-6. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Magnesium L-threonate powder (778571-57-6), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
Magnesium L-threonate ntụ ntụ bụ otu n'ime nsogbu kachasị njọ na mba ụwa dị n'ebe ọdịda anyanwụ, nke kachasị na-enye nsogbu maka itinye aka na nchịkwa 300 enzymatic n'ime ahụ. Magnesium threonate bụ otu n'ime ụdị nke magnesium kachasị dị ndụ na karịsịa maka melite ọkwa magnesium na ụbụrụ.
Magnesium L-threonate ntụ ntụ video
aha: Magnesium L-threonate ntụ ntụ
Molekụla arọ: 294.49
agba: ọcha ma ọ bụ fọrọ nke nta ọcha crystalline ntụ ntụ
Raw Magnesium L-threonate ntụ ntụ na-arụ ọrụ ụbụrụ na mmelite ọzọ
Ngwá ọrụ magnesium threonate kwesịrị ekwesị dị gburugburu 1-2 gram iji nwee ike ịba ụba nke magnesium elemental. Ihe ka ọtụtụ na-egosi na 200 mg nke elemental magnesium kwa ụbọchị na threonate bụ otu n'ime isi mmalite kachasị mma.
Ịdọ aka ná ntị na tebụl L-threonate dị elu
Mmetụta intestinal nke magnesium dịgasị iche na-adabere n'otú magnesium si chọọ ahụ, n'ihi ya, enweghi mmetụta dị ukwuu na-emetụta ya na supplementation. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ magnesium, ahụ ga-anakwu ihe ọ bụla ọ chọrọ. Otú ọ dị, nnukwu doses nwere ike ịkpata nsogbu ịrịa afọ na afọ ọsịsa. Enweghị mmetụta ọ bụla metụtara.
Ndị na-eme nnyocha na-ekwu na Magnesium L-threonate ntụ ntụ nwere ike ịgbanwe ọnọdụ nke nri uche na-enyere onye ọ bụla aka ma nọgide na-arụ ọrụ kacha mma na ọ bụla ogbo nke ndụ.
Obi dị m ụtọ, ndị na-eme nchọpụta na MIT chọpụtara na Magnesium L-threonate ntụ ntụ nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ nke magnesium ụbụrụ gị banye. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ndị nchọpụta kwuru na magnesium L-threonate ntụ ntụ dị mma ma obere oge na ogologo oge ncheta
Ná nchọpụta mbụ nke e bipụtara na Neuron akwụkwọ akụkọ dị elu na 2010, ndị nchọpụta MIT na-enyocha ụdị ọ bụla nke magnesium na-agbakwunye ma gosipụta na ụdị anụmanụ nke Magnesium L-threonate powder-na nanị Magnesium L-threonate powder-nwere ike ịbanye n'ime ụbụrụ ma bulie magnesium etoju. Na ntinye ha, mmụba a na ụbụrụ ụbụrụ magnesium mere ka ọ bụrụ uru ndị a na-ahụ anya na ihe ndị dị na ụbụrụ.
Nchoputa mbu nke magnesium threonate mere ndi ọkà mmụta sayensị na UCLA, ma ihe omumu di otutu otutu uru. Otu uru dị ukwuu nke magnesium threonate bụ maka absorption.Given enwere ọkara iri na abụọ dị iche iche magnesium, tinyere ụfọdụ ndị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị a na-adịghị ahụkebe, nke a bụ àgwà dị oke egwu na nke bara uru.
Ozugbo magnesium agafewo mgbochi ụbụrụ ọbara, ọ na-aga na-arụ ọrụ nlekota nchekwa nke a na-ahazi na ogologo ma dị mkpirikpi. Ebe ọ bụ na magnesium gụnyere enzymes nke na-agba ọsọ ụzọ synaptic (njikọ na ụbụrụ), ịnweta ihe enyemaka ọ bụghị nanị na-eme ka echeta ngwa ngwa, kama na-echebekwa ha n'oge agadi.
Uru ọzọ nke magnesium threonate bụ mma ụra mma. Dị ka nchọpụta 2002 na magazin nke Pharmacopsychiatry, magnesium threonate na-agbanwe ụfọdụ ndị natara na nnyefe a na-akpọ GABAergic na glutamatergic. Ndị ọkà mmụta sayensị tụnyere ụbụrụ EEG na ụbụrụ iji chọpụta magnesium threonate na-enyere aka n'ile ụra.
Maka otu ihe kpatara ya, ọtụtụ ndị na-eri magnesium threonate na-eche na ọ naghị esiri ha ike ma na-echegbu onwe ha karịa nke ọzọ.
Magnesium L-threonate Kacha Powder
Esi esi AASraw zụta Magnesium L-threonate powder